Pipe galerie tsy miova toetr'andro toetr'andro dia nanjary fitaovana fifandraisana ilaina-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2019-12-31 HITS: 43
Amin'ny toetoetran'ny galerianina, ny galeraly tsy azo sakanana armord telefaonina toa fitaovana tsy azo ampiasaina, fa noho ny fikojakojana ny fantsom-pifaneraserana isan-karazany ao amin'ny galeriany, ny fikojakojana ny galeriany ihany, ary ny antony hafa, ny galeriana dia tsy misy fandrakofana ireo fambara finday ao amin'ny lalantsara. Tsy maintsy misy matihanina marobe ao amin'ny lalantsara ivelan'ny fiasan'ny mpiasa sy ny fikojakojana miasa ao amin'ny lalantsara. Noho izany, ny rafi-pifandraisana raikitra ny lalantsara no lasa hany fifandraisana ivelany ho an'ireto mpiasan'ny lalantsara vonjimaika ireto. Ny telefaona Ny rafitra dia nanjary rafitra fiantohana fifandraisana hahafahan'izy ireo mamita ny asany sy manome fahombiazana. Nahavita tetik'asa marobe ho an'ny galeriana ary manana traikefa betsaka i Ningbo Joiwo ary asehoy anao ny antsipirian'ny telefaona Gallery.
voalohany,Rafitra rafitra finday:
Ny telefaona lalantsara dia misy rafitra fitantanana afovoany apetraka ao amin'ny foibe fanaraha-maso sy ny fanitarana (na singa fanampiny) napetraka ao amin'ny lalantsara. Ny rafi-pitantanana eo afovoany dia misy mpizara lozisialy, foibe fanaraha-maso afovoany, tobim-piasana, telefaona fanaraha-maso afovoany ary mikrô fandefasana fampielezam-peo sy fitaovana fikirakirana fitaovana ary rindrambaiko fanaraha-maso hafa.
faharoa,Fantson-telefaona finday amin'ny paompy:
1. Antso fidirana sy fidirana tsy voafetra: Ny rafitra dia afaka mampihatra antso eo anelanelan'ny fanitarana (na mpanampy) ao anatin'ny lalantsara, eo amin'ny fanitarana (na mpanampy) sy ny foibe fanaraha-maso, na eo anelanelan'ny fanitarana (na mpanampy) ao anatin'ny lalantsara. Mametraha fifandraisana an-tariby amin'ireo mpampiasa tambajotra ivelany (fanaraha-maso ny alalana amin'ny fifandraisana).
2. Fampielezam-peo afovoany: ny mpitantana ny foibe fanaraha-maso dia afaka mamoaka ny fampielezam-peo amin'ny fanitarana (na ny milina mpanampy) amin'ny alàlan'ny toeram-piasana, ary afaka misafidy arakaraka ny habaka voafehy araky ny filàna.
3. Fikirana fanaraha-maso sy fahazoan-dàlana: Ny foibe dia afaka manara-maso sy mametraka ny fahazoan-dàlana hiantsoana izay fanitarana (na telefaona mpanampy). 4. Fizahan-tena sy fanasitranana tena: Ny rafitra dia manana solo-n'ny tenany irery ihany, izay afaka manao fizahan-tena amin'ny tambazotra peratra sy ny fanitarana (andevo) ao amin'ilay rohy, ary afaka manasitrana ny tenany. Ny sisin-dàlana rehetra dia tsy misy fiatraikany amin'ny fiasan'ny rafitra mahazatra.
5. fandraisam-peo sy playback: ny rafitra dia afaka mirakitra sy milalao ny antso rehetra mankany amin'ny tsipika afovoany sy ivelany ary koa ny antso ao anaty lalantsara.
6. Fanokafana ny seranan-tsambo: Ny rafitra dia afaka manome ny mombamomba ny rafitry ny telefaona fantsom-panodinana iray manontolo takian'ny sehatra fitantanana amin'ny alàlan'ny OPC na protokol UDP, mahatsapa ny fizarana vaovao ary manana ny antontan'isa momba ny antontan'isa hanomezana fanampiana ho an'ny fitantanana ..
fahatelo,Pipe extension extension sy mpandraharaha asa:
1. Ny fanitarana galerià dia misy lahasa an-tariby sy fampielezam-peo mahazatra.
2. miaraka amina asa tsy tanana.
3. miaraka amin'ny asan'ny porofo mipoaka.
4. Fitaovana fanairana azo henoina sy hita maso ary fitaovana fampandrenesana bokotra iray an'ny SOS, raha sendra vonjy maika, ny bokotra iray dia afaka miresaka mivantana amin'ny foibe.
5. Fitaovana fitaovana fanamafisam-peo sy hamandoana, afaka miara-miasa amin'ny rafitra izy io mba hamenoana ny angon-drakitra sy ny antontan'isa.
6. Miaraka amin'ny haavo fiarovana IP67 dia mety ho voaroboka anaty rano izy io, azo antoka ny hamandoana ary mahatohitra harafesina.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny halavan'ny lalantsara sy ny karazana fantsom-pifandraisana miditra amin'ny lalantsara, dia hiasa ao amin'ny lalantsara ny mpiasan'ny lalantsara vonjimaika ary ny fiankinan-doha amin'ny rafitra fiarovana ny serasera ao amin'ny lalantsara dia hihamatanjaka sy hihamatanjaka. Ny rafi-pifandraisana an-tariby dia tsy fifandraisana an-tserasera tsy voatery, ary tsy rafitra fandefasana telefaona vonjy maika, fa rafitra fiantohana fifandraisana manan-danja mifandraika amin'ny fitantanana sy ny fahombiazan'ny fikojakojana ny lalantsara.
Ningbo Joiwo tsy azo sakanana manam-pahaizana manokana amin'ny telefaona indostrialy toa ny IP na ny rafitra telefaona analog, telefaona tsy misy toetr'andro, telefaona misy fipoahana, telefaona manimba, telefaona maimaimpoana, telefaona amin'ny telefaona ary telefaona an-tranomaizina. indostria, Tunnel, metro, lalamby, lalamby, ranomasina, sambo, any ivelany, toeram-pitrandrahana, jiro, hotely, hopitaly, fonja.